Erduqaan oo shuruudo ku xidhey xabad-joojinta Liibiya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Erduqaan oo shuruudo ku xidhey xabad-joojinta Liibiya
Madaxweynaha Turkiga Erduqaan oo Muslimiin badan gacantiisa ku baxday dalkaasi Liibiya iyo Siiriya ayaa sheegay in xabad-joojinta Liibiya ku imaanayso in marka hore ciidanka qaranka Liibiya ka baxaan magaalada Sirte iyo saldhiga Jufra.
Erduqaan oo aan si toosa ugu jawaabin madaxweynaha Masar oo sheegay in magaalo xeebeedka Sirte iyo saldhiga JUfra ay yihiin khad cas oo haddii ururka akhwaan qabsado ay qasbayso in Masar iska difaacdo urur diimeedkaas Erduqaan soo hubeeyay.
Erduqaan oo weji-gabax kala kulmey Taram
Dhinaca kale waxa Erduqaan sheegay in xulafo uu ka filaayay Taram uu ku hungoobey ay hadda ay rabin inay wax ku darsadaan Liibiya. Turkiga ayaa ku jabaya haddii ciidanka Masar soo galo Liibiya. Mana dhacayso in Taram la safto Erduqaan kana soo horjeedsado Masar, Guriiga ayuu yiri Xuseen Warsame.
Hadalka ka soo yeeray Erduqaan ayaa u muuqda in xaalku ku xunyahay oo keliya ay u furan tahay hal wado oo ah inuu la hadlo jeneraal Khaliifa ama halka hadda ay joogaan ee looga soo baxay ay ku ekaadaan.
Jeneraal Khaliifa oo haysta dhulka ugu badan Liibiya iyo kheyraadkeeda ayaa taageerada ugu haysta Masar inkastoo wadamada kale sida Faransiiska iyo Ruushka ayna cudud ku biiran.
Dagaalka Erduqaan ka wado Liibiya oo Qadar bixiso dhaqaalaha ku baxaya ayaan haba yaraatee ku qotomin diin laakiin ku qotomo saliid ama kheyraad dheeriya hel.